Uvavanyo lokuqina kobunzima - iYuyao Jera Line Fitting Co, Ltd.
Uvavanyo lokulinganisa ubunzima lusetyenziselwa ukuqinisekisa ukuba iimveliso okanye izinto ezinokuxhathisa ifuthe loomatshini ngexesha lofakelo okanye lokusetyenziswa kunye nezinye iimveliso ezifanelekileyo. Yenye yezalathiso ezibalulekileyo ukukhangela iipropathi zezinto, uvavanyo lobulukhuni lunokubonisa umahluko kubume bamachiza, ulwakhiwo lwethishu kunye netekhnoloji yonyango lwezixhobo.
Injongo ephambili yovavanyo lokuqina kukuqinisekisa ukufaneleka kwezixhobo zesicelo esinikiweyo. Izinto eziqhelekileyo ezinje ngentsimbi, iplastiki, iribhoni inokumelana nayo deformation, ukugoba, ukunyathela umgangatho, uxinzelelo, ukugqobhoza.
UJera uqhubeka nolu vavanyo kwiimveliso ezingezantsi
-Fiber optic yamasango
Izixhobo zombane ophezulu
-Izinto ezincinci zentloko yokucheba iintloko ze-bolt kunye nezihlanganisi
Ombane ezantsi ABC yamasango
Izihlanganisi zokugqobhoza indawo (IPC)
Ombane ezantsi intambo ombane isibiyeli
-Ifiber yokulahla intambo ye-optic
-Ukuvalwa kwe-splice ebonakalayo
Sisebenzisa umatshini wokuvavanywa kobunzima be-rockwell ukuvavanya iimveliso zentsimbi kunye nezinto zokwakha, sisebenzisa umatshini wokuvavanya ubulukhuni elwandle ukuvavanya izinto zeplastiki kunye neeribhoni.
Sisebenzisa izixhobo zovavanyo kuvavanyo lomgangatho wemihla ngemihla, ukwenzela ukuba abathengi bethu bafumane iimveliso ezihlangabezana neemfuno ezisemgangathweni. Ilabhoratri yethu yangaphakathi iyakwazi ukuqhubeka noluhlu lweemvavanyo ezinxulumene nomgangatho.